China Synthetic Mika အမှုန့်စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ Huajing
HUAJING ဒြပ် mika စီးရီးထုတ်ကုန်သည်မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် crystal အရည်ပျော်စေခြင်း၏နိယာမကိုချမှတ်သည်။ အပူဓာတ်ကိုအပူ ပေး၍ အရည်ပျော်မှုမြင့်မားခြင်း၊ အအေးခံခြင်းနှင့်ပုံသွင်းခြင်းတို့မှထုတ်လုပ်ပြီးနောက်သဘာဝမက္ကာ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံအရ၊
ရော်ဘာအဆင့် Mica Powder
ပစ္စည်း အရောင် အဖြူရောင် (ဓာတ်ခွဲခန်း) အမှုန်အရွယ်အစား D90 (μm) insulation သန့်ရှင်းစင်ကြယ် (%) သံလိုက်ပစ္စည်း (ppm) နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း （%） LOI (၆၅၀ ℃) PH မှတ်ချက်
ဒြပ် Mica Powder
HCD-200 အဖြူရောင် ＞ ၉၆ 60 အလွန်မြင့်မား ＞ 99.9 ＜၅၀ ＜0.5 ＜0.1 ၇.၆ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် insulator တွင်လည်း
HCD-400 အဖြူရောင် ＞ ၉၆ 48 အလွန်မြင့်မား ＞ 99.9 ＜၅၀ ＜0.5 ＜0.1 ၇.၆
HCW-200 အဖြူရောင် ＞ ၉၈ 65 အလွန်မြင့်မား ＞ 99.9 ＜၂၀ ＜0.5 ＜0.1 ၇.၆ High-end insulator တွင်လည်းထုတ်ကုန်
HCW-400 အဖြူရောင် ＞ ၉၈ 50 အလွန်မြင့်မား ＞ 99.9 ＜၂၀ ＜0.5 ＜0.1 ၇.၆
HCW-600 အဖြူရောင် ＞ ၉၈ 25 အလွန်မြင့်မား ＞ 99.9 ＜၂၀ ＜0.5 ＜0.1 ၇.၆
HCW-1250 အဖြူရောင် ＞ ၉၈ 15 အလွန်မြင့်မား ＞ 99.9 ＜၂၀ ＜0.5 ＜0.1 ၇.၆
ရာဘာနယ်ပယ်တွင်အသုံးပြုသောအခါ mica သည်ရော်ဘာထုတ်ကုန်များအတွက်အားကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိစေသော Mica ကိုယ်နှိုက်၏ရှုထောင့် ၂ ခု၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုအဓိကအသုံးပြုသည်။ သဘာဝအလွန်ကောင်းမွန်သောလျှပ်ကာပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများ၊ မြင့်မားသော insulator တွင်လည်းရော်ဘာအတွက်ကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ် insulation performance ကိုပေးစွမ်းသည်။ mica စာရွက်၏အတားအဆီးအားသာချက်ကို အသုံးပြု၍ လေထုကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်တိုးစေသည်။ ရာဘာပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများအတွက်စီးပွားရေးအဖြေတစ်ခုပေးသည့် silica သည်၎င်းကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအစားထိုးနိုင်သည်။ Excellent shear resistance and abrasion resistance သည်မြင့်မားသောပွန်းပဲ့နိုင်သည့်ရာဘာ၏ကြာရှည်ခံသောပွန်းပဲ့မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ချောမွေ့။ ကောင်းမွန်သောမျက်နှာပြင်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်မှိုများအတွက်အထီးကျန်ခြင်းလက္ခဏာများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
HUAJING ဒြပ် mika စီးရီးထုတ်ကုန်သည်မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် crystal အရည်ပျော်စေခြင်း၏နိယာမကိုချမှတ်သည်။ အပူဓာတ်ကိုအပူ ပေး၍ အရည်ပျော်မှုမြင့်မားခြင်း၊ အအေးခံခြင်းနှင့်ပုံသွင်းခြင်းတို့မှထုတ်လုပ်ပြီးနောက်သဘာဝမက္ကာ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံအရ၊ ဤသည်ထုတ်ကုန်မြင့်မားသောအဖြူရောင်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းနှင့် ransparence, စူပါနိမ့်သံပါဝင်မှု, မိုးသည်းထန်စွာသတ္တုမျှ, အပူ - ခံနိုင်ရည်, အက်ဆစ်ခံနိုင်ရည် alkali ကိုခံနိုင်ရည်နှင့်လည်းအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောဓာတ်ငွေ့၏ချေး, တည်ငြိမ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကောင်းသော insulator တွင်လည်း၏အားသာချက်များကိုရှိပါတယ်။
Synthetic Mica နှင့် Natural Mica အကြားအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုခြားနားချက်
၁။ Synthetic mica တွင် hydroxyl (OH) မပါ ၀ င်ပါ။ ၎င်း၏မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်နှင့်အပူတည်ငြိမ်မှုသည်သဘာဝ mica ထက်မြင့်မားပြီးဝန်ဆောင်မှုအပူချိန်မှာ ၁၁၀၀ ℃ခန့်ရှိသည်။ fluorophlogopite သည်တဖြည်းဖြည်း 1200 above အထက်တွင်ပြိုကွဲသွားပြီး fluorophlogopite ၏အရည်ပျော်အပူချိန်သည် 1375 ±5is ဖြစ်သည်။ သဘာဝမိက္ခာကိုအများဆုံးအသုံးပြုသည့်အပူချိန်မှာ Muscovite 550 ℃; Muscovite 800 ℃ (သဘာဝ Muscovite သည် 450 450 at စတင်ပြိုကွဲခဲ့ပြီး 900 at တွင်လုံးဝနီးပါး; Muscovite သည် 750 750 တွင်ပြိုကွဲပျက်စီးသွားပြီးအလေးချိန်သည် 900 above အထက်) ရှိသည်။ Mika အမျိုးအစားများကိုမြင့်မားသောအပူချိန်အပူသို့မဟုတ် differential ကိုအပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
2. Synthetic Mika သည်စင်ကြယ်သောအညစ်အကြေးများနှင့်ကောင်းမွန်သောပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိပါ။ ၎င်း၏မာကျောမှုသည်သဘာဝသန္တာကျောက်ထက်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသည်မှအပအခြားစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများ၊ လျှပ်စစ်ကာကွယ်မှုနှင့်ဒြပ်သတ္တုဓာတ်၏လေထုညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများသည်သဘာဝသန္တာကျောက်များထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ Synthetic Mika သည်သဘာဝ mica ကိုလုံးဝအစားထိုးနိုင်သည်။ အပူချိန်မြင့်မားသောအပူဒဏ်ခံနိုင်သောပစ္စည်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးအထူးကောင်းမွန်သောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။
အေ 20 သို့မဟုတ် 25kgs / PE ယက်အိတ်
ခ 500 သို့မဟုတ် 1000kgs / PP အိတ်
ရှေ့သို့ သဘာဝ mica အမှုန့်
ဒြပ် Fluorphlogopite Mica
ဒြပ် Mica အလွှာ
ဒြပ် Mica မိတ်ကပ်
စက်ရုံလက်ကားနီ Red Mica - စိုစွတ်သောရေနံအမှုန့်နှင့် ...
Fixed ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်း Mica Powder Crafts - N ...
Mica Powder အွန်လိုင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန် - ပုလဲ ...
Tumblers များအတွက်ဈေးအသက်သာဆုံး Mica Powder - Wet ...
တရုတ်လက်ကား Mica Shimmer - Phlogopite mi ...
လက္ကားစျေးနှုန်း Synthetic Mica အလွှာ - အပူ mic ...
စက်ရုံဆိုင်ခွဲများ calcined မိက္ခာ - Natural mica p ...
Mica Powder ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများ -
လျှော့စျေးစျေး Artisan Mica Powder - ခြောက်သွေ့သောပေါင်မုန့် ...
ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များအလှကုန်ပစ္စည်း - Mica Powder - ...
လက်ကားဈေး China Cosmetic grade Mica Powde ...
Eye Makeup တွင်အမြန်ပေးပို့ခြင်း - Synt ...